တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ်ကျောင်းသားကွန်ရက် ၉၃နှစ်ပြည့် အမျိုးသားနေ့တွင်ဖွဲ့စည်း | Burma Muslim
တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ်ကျောင်းသားကွန်ရက် ၉၃နှစ်ပြည့် အမျိုးသားနေ့တွင်ဖွဲ့စည်း
By burmamuslim on November 29, 2013	မိုးပြာ (မြန်မာမွတ်စလင်မ်မီဒီယာ)
နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၃
တက္ကသိုလ် မွတ်စလင်မ်ကျောင်းသားကွန်ရက်(မြန်မာ) ကို ဒီကနေ့ မှာပဲ စတင်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီလို့ ဖဘ မှာပျံ့နှံ့လာတဲ့ သတင်းတွေအရသိရပါတယ်။
University Muslim Students Network – Myanmar ဆိုတဲ့အမည်နဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ ဖဘ Like Page မှာဖေါ်ပြထားတာကတော့ UMS ကွန်ရက်ပာာ နိင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းမပာုတ်သလို ဘာသာရေးအဖွဲ့ အစည်းလည်းမပာုတ်ဘဲ ကျောင်းသား အခြေပြုလူမှုကွန်ရက်တစ်ခုသာဖြစ်ပါသတဲ့။
မှုရင်းမှာတော့ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အခုလိုဖေါ်ပြထားပါတယ်။ UMS Network is neither political nor religious network. Justastudents-based social network.
တက္ကသိုလ်မွတ်စလင်မ်ကျောင်းသားကွန်ရက်(မြန်မာ) ဖွဲ့စည်းတဲ့နေ့ပာာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် မြန်မာနိင်ငံရဲ့ ၉၃ နှစ်မြောက်အမျိုးသားနေ့နဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသကို အန်ဂျီအိုအဖွဲ့တစ်ရပ်အနေနဲ့သွားရောက်လှုဒါန်းမှုပြုတုန်းက အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ Shine Win က သူ့ရဲ့ ဖဘ စာမျက်နှာမှာ ” ယနေ့ဟာမြန်မာပြည်သမိုးမှာ ရာဇ၀င်တင်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းရာဇ၀င်တင်တဲ့ အမျိုးသားနေ့မှာပဲ သမိုင်းမှတ်ကျောက် နောက်တစ်ခု ထပ်မံတင်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ အသစ်ထပ်မံတင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းမှတ်ကျောက်ကတော့ မြန်မာ့အစဉ်အလာနဲ့သမိုင်းမှာ ဖျောက်ဖျက်မရအောင် ကဗ္ဗည်းထိုးထားခဲ့တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရဲ့ ပညာရေးဆိုင်ရာဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုမှုများနဲ့ ပညာရေးအတွက် တော်လှန်တိုက်ပွဲ ၀င်ခဲ့ကြတဲ့ ဆရာကြီးဦးရာဇတ်၊ ၀န်ကြီးဦးရာရှစ်တို့မှသည် ယခုမျိုးဆက်သစ်တို့ လက်ထက်သို့ သွေးသစ်လောင်း လက်ဆင့်ကမ်းအမွေကို ရယူခဲ့ခြင်းပါပဲ” ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ပါဝင်တဲ့ ပို့စ်တစ်ခုကို တင်ထားပါတယ်။ကိုရှိုင်းဝင်းရဲ့ ပိုစ့်ကို အပြည့်အစုံ ဖတ်လိုသူများ ဒီလင့်ကိုနိုပ်လိုက်ပါ
“မွတ်စလင်မ်ညီနောင်၊ လက်တွဲအောင်၊ပညာလည်းမြင့်၊ လူ့ဂုဏ်တင့်၊တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးဝင့်” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို တင်ထားတဲ့ University Muslim Students Network – Myanmar ရဲ့ ဖဘ စာမျက်နှာကို ကြည့်ချင်ရင်တော့ ဒီလင့်ကို နိုပ်လိုက်ပါ။
့ အထက်ပါ ဖဘစာမျက်နှာကို Like လုပ်ထားသူ ၇၇၈ ဦးရှိသည် အထိတော့ UMS ကွန်ရက် နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ်သတင်း အချက် အလက်တွေ ကိုတစ်စုံတစ်ရာဖေါ်ပြထားခြင်းမရှိသေးကြောင်းပါ။